Pixel 4 XL 5G gafere Geekbench na Snapdragon 855 na ndị ọzọ | Gam akporosis
Oge ọ bụla anyị na-eru nso ụbọchị mwepụta nke ọhụrụ Google Pixel 4, nke a ga-ahazi n’October 15, ụbọchị nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ọnwa. Ndị a ga-abụ ọkọlọtọ na-esote nke ụlọ ọrụ Mountain View maka gam akporo, a tụrụ anya ọtụtụ ihe n'aka ha, yana ọzọ na foto ngalaba, nke bụ ebe ọgbọ ndị gara aga kacha pụta ìhè.
Izu ole na ole gara aga a, karịa ndị ọzọ, ejirila ọtụtụ asịrị na leaks gbasara ihe ụlọ ọrụ ahụ chebere anyị na ekwentị ndị a. Ihe kacha sie ike - na nke akwadoro - na ọ dị ugbu a metụtara ngalaba foto azụ ya, nke a ga-etinye na ụlọ azụ nwere ihe karịrị igwefoto igwefoto. Ka ọ dị ugbu a, ihe ọhụụ abịakwutela anyị dị ka achịcha na-ekpo ọkụ nwere njikọ na na-arụpụta na Pixel 4XL 5G debanye aha na Geekbench, anyị ga-ekwukwa banyere nke a n'okpuru.
Geekbench na-ekpughe ozi ndị ọzọ banyere Pixel 4 XL 5G tupu ọ bịarute
Google Pixel 4 XL 5G na Geekbench
Pixel 4 XL 5G ga-abịa na a njikwa Snapdragon 855 site na Qualcomm. Akwadoro nke a na ndepụta nke benchmark ezigala na nchekwa data ya, nke na-egosi na SoC nke dị n'okpuru mkpuchi nke ekwentị ahụ nwere isi asatọ ma nwee isi mgbatị nke 1.78 GHz. Cheta na SD855 bụ octa-core Chipset nke nwere ọnya Cortex-A76 anọ (nke a na-ege ntị na 2.84 GHz na atọ ruo 2.42 GHz) na Cortex-A55 anọ ọzọ bụ ndị edoziri na ọsọ ọsọ 1.8 GHz.
Ihe nchekwa RAM nke ụdị ụdị a buru ibu ma dị elu bụ 8 GB, ma ọ bụ na nke ahụ bụ ihe Geekbench gwara anyị. Na mgbakwunye, olee otu ọ ga - esi bụrụ ihe ọzọ, ọ na - abịa na nke ọhụrụ gam akporo 10.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Pixel 4 XL 5G sitere na Geekbench na Snapdragon 855 na ndị ọzọ
Realme 5 bụ bestseller na India